Chimney Fairy | Vaovao momba ny dia
Maria | | Toerana fitsangatsanganana, Fialan-tsasatra
Ny geolojia dia mahatsikaiky sy maro karazana noho izy mety hiseho amin'ny fahitana azy voalohany. Ohatra amin'izany ny chimney fairy, fantatra koa amin'ny hoe hoodoo, demoiselle coiffée na piramida.
Ireo dia formations rock izay mijoro avo toa ny trano ambony any New York. Tilikambo vato voahodidin'ny rivotra, orana ary ranomandry izay mety mihoatra ny 40 metatra ny haavony ary ny endriny nofinofy dia mampatsiahy antsika tontolo hafa izay azo jerena ihany koa eto amintsika. Ireo karazana tsanganana vato ireo dia tsy miankina amin'ny faritra tokana amin'ny planeta. Hita amin'ny toerana samihafa izy ireo. Atorinay anao izay!
1 Cappadocia (Torkia)
2 Bryce Canyon National Park (Etazonia)
Cappadocia dia iray amin'ireo toerana manandanja indrindra misy any Tiorkia. Mifangaro ny natiora sy ny tantara mba hanomezana fotoana tsy hay hadinoina ny mpitsidika. Ny iray amin'ireo tsiambaratelo tazomin'ity faritra ity dia ireo vavony miafina izay niteraka ny sasany amin'ireo sary voajanahary tsara tarehy indrindra ao amin'ny firenena.
Nisy angano iray nilaza fa i Cappadocia dia olon'ny maizina sy olombelona no nonina. Voarara ny sendika mifangaro mba hahasoa sy hitohizan'ny karazany roa, fitsipika izay tsy narahina foana. Raha ny fitantaran'ity tantara ity dia indray mandeha ny sakaiza sy ny lehilahy iray dia nifankatia be ka tsy nahafoizany ny fihetseham-pony. Avy eo, nandray fanapahan-kevitra hentitra ny mpanjakavavin'ireo matoatoa: novainy ho voromailala ireo mpanao ody goavambe ary norobainy ny lehilahy hahita azy ireo. Na izany aza, afaka nijanona tao amin'ny fikarakaran'ireo vorona izy ireo.
Zavatra iray tokony hotadidina ao an-tsaina rehefa mijery ny vavahady angano any Tiorkia dia ny fahitana azy ireo amin'ny toerana maina sy maina toy ny tany efitra. Noho io antony io, ao amin'ny faritr'i Cappadocia dia misy ohatra miavaka amin'ny vavonin-tsambo fairy manokana any akaikin'i Aktepe, any avaratry Cappadocia. Na izany aza, tsy azonao atao ny tsy mahita ny faritra Uçhisa na ny Lohasahan'i Palomar.
Bryce Canyon National Park (Etazonia)
Any atsimo andrefan'ny fanjakan'i Utah sy akaikin'ny tanànan'i Kanab no misy an'i Bryce Canyon National Park, izay toa nalaina avy amin'ny fanjakana nofinofy. Angamba tsy aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao no miharihary ny fikaohon-tany voajanahary noho ny any amin'ity faritra andrefan'i Etazonia ity.
Rivotra sy rano ary ranomandry no nanimba ny fon'ny lembalemban'i Paunsaugunt mba hanambara tany efitra fivahinianana angano na hoodoos. Ny tera-tany amerikanina dia nino fa ny vavahady angano dia momba ny zavamananaina taloha nohomboan'ny andriamanitra.
Izany dia nahatonga amphiteater tsara tarehy voahodidina hantsana sy tilikambo vato izay azo zahana amin'ny soavaly na an-tongotra. Amin'ny alina dia mety ny mijery ny lanitra satria io no iray amin'ireo toerana maizina indrindra eto an-tany izay ahitanao ny kintana amin'ny mazava kokoa.
Ao amin'ny Lohasahan'i Ebro dia misy vavahady angano maromaro, indrindra amin'ny toerana antsoina hoe A Peña Sola de Collas any amin'ny faritr'i Aragon any Cinco Villas. Raha tsy mandao ilay vondrom-piarahamonina mahaleo tena mitovy amin'izany ianao, ao Alto Gállego dia afaka mahita tsanganana vato eo amin'ny zoro fantatra amin'ny anarana hoe Señoritas de Arás ary koa ao amin'ny faritra Campo de Daroca any Biescas.
Ny toerana hafa any Espana izay misy koa ny fivoahan'ny angano dia ao amin'ny efitra Bárdenas Reales, any Castildetierra (Navarra).
Na dia toa tsy azo atao aza, ny atsimon'i Frantsa dia mbola manana tsiambaratelo hita ho an'ny mpandeha. Ao amin'ny faritr'i Pyrénées-Orientales, misy ny tanànan'ny Perpignan, dia i Les Orgues d'Ille sur Têt, vatolampy mahatalanjona mitazana ny tendrombohitra Canigou izay voasokitra tamin'ny rano sy rivotra nandritra ny taonjato maro.
Ny tontolon'ny Orgues d'Ille sur Têt dia manana firafitra vato izay toa namboarin'ny mpanao sary sokitra tsy fantatra anarana, toy ny vavahady angano. Izy io dia mitovy amin'ny amphiteater misy rindrina tapaka ho tsanganana goavambe. Maina ny tany ary na dia toa tsy natahotra nandritra ny taona maro aza ireo vavonin-angano, ny marina dia marefo kokoa noho ny fisehoany izy ireo satria ny ranonorana sy ny rivotra no miova tsikelikely ary manova azy ireo ho vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Toerana fitsangatsanganana » Solombavam-bahoaka Fairy
Dia an-tongotra namaky ny Quarter Latina, tany Paris